Ecommerce Ezumike: Mobile, Mbadamba ụrọ na Desktọpụ | Martech Zone
Ecommerce Ezumike: Mobile, Mbadamba ụrọ na Desktọpụ
Tọzdee, Disemba 6, 2011 Sunday, December 4, 2011 Adam Obere
Nke a bụ ihe na-adọrọ mmasị na mmefu na ntụgharị oge ezumike a site na ndị folks Monetate. Althought ọ na-enye anyị ihe akaebe doro anya nke mmụba nke Mobile na Mbadamba ụrọ maka ịzụrụ site na Black Friday na Cyber ​​Monday, ọ na-enye ntakịrị nghọta banyere omume dị iche iche nke ndị mmadụ na-eji mbadamba, mobile na desktọọpụ. N'uche m, ọ na-egosi na ndị nwere mbadamba nkume nwere ọmarịcha ịzụ ahịa si n'aka ha mana ndị na-agagharị agagharị nwere ike ghara inwe obi abụọ. Ikekwe ọ bụ n'ihi na ebumnuche ha bụ ime nyocha ma ọ bụghị ịzụta
Tags: tinye-na-cart udunwa ogecyber mondaydesktọọpụ tinye-na-igbe ududesktọpụ ibiaghachi ududesktọọpụ ntọghata uduecommercemobile tinye-na-cart uduọnụego bouncemobile ọnụego mgbanwembadamba tinye-na-cart udumbadamba ibiaghachi udumbadamba ọnụego mgbanwe
5 Uru & Ndụmọdụ maka ịzụrụ ọdịnaya
Dee 6, 2011 na 10: 37 AM
Nọmba "Add-to-cart" gụnye naanị ịzụrụ n'ịntanetị. Echere m na ndị ọrụ mkpanaka nwere ike ịzụta dị ka oge ụfọdụ, mana na-achọkarị ịzụta na ụlọ ahịa. Dịka ọmụmaatụ, m na-ejikarị mkpanaka iji chọpụta adreesị ụlọ ahịa / oge mmeghe. Enwere ihe akaebe ọ bụla maka ịsị na ndị ọbịa na ngwaọrụ mbadamba na-aga n'ihu na ntugharị ntugharị?
Dee 6, 2011 na 10: 46 AM
Nnukwu ebe, MarketingXD, na nke anyị kwesịrị imetụ aka. M maa echeghị na mobile ọrụ ndị na-erughị ihe bara uru… ha dị nnọọ ka ndị bara uru, ma ọ bụrụ na ọ bụghị karịa! Na ha ewu ewu na-eto eto!